Abantu abangu-8 bashe bangqongqa ekhaya lezintandane – LIVE Express
Kushone abantu abayi-8, kwathi abayi-10 balimala ngenkathi kuqubuka umlilo ekhaya lezintandane, i-Lakehaven Child and Youth Care Centre, eThekwini, ezintathakusa ngoLwesine.
Kubikwa ukuthi izingane ezishonile zilinganiselwa eminyakeni eyi-8 kuya kweyi-19 ubudala.
uMqondisi oMkhulu kuleli khaya lezingane ezingasenabazali, u-Shehnaaz Gabru, utshele izikhulu zikaMasipala weTheku, ebeziyobhonga emswaneni emva kwesigameko, ukuthi abasebenzi bakuleli khaya baye benza ukuhlola okujwayelikile ngezikhathi zabo-01:15, ngenhloso yokubheka ukuthi izingane zilele zonke yini.
Ngaleso sikhathi uthi bathole ukuthi beziyi-18 izingane ebezisekotishi.
“Ngezikhathi zabo -01:40, abagadi bezingane baqaphelile ukuthi kunomlilo kwelinye lamakotishi. Imigudu elandelwayo yokutakula ilandeliwe, kodwa ngebhadi ezinganeni eziyi-18 sikwaze ukuhlenga eziyi-10 zazo,” kuchaza u-Gabru.
Iningi lezingane ezihlala kuleli khaya zisindele ukuthi kusengamaholidi okuvalwa kwezikole njengoba u-Gabru eveze ukuthi kuleli khaya kuhlala izingane ezingama-60 nathi izingi lazo bezingekho zisavakashele izihlobo zazo.
Abantu abayi-10 abasindile kubikwa ukuthi balashelwa ukuhilwa yintuthu.
iMeya yeTheku, u-James Nxumalo, uthembise ukuthi bazosebenzisana naleli khaya lezintandane kanye nemindeni ukuze baqinisekise ukuthi bangcwaba izihlobo zabo ngendlela enesizotha.
Izonyuka imiholo yongqongqoshe namakhosi
Kunconywe amakhosi ngokugxeka ukuthwala